Haddii Shacabka Somaliland Ka Go’antahay Wax Soo Saar, Waa Inay Fadhiga Ka Kacaan ‘Nimaan Shaqaysan Shaah Ma Cabo’ | Himilo Media Group
Haddii Shacabka Somaliland Ka Go’antahay Wax Soo Saar, Waa Inay Fadhiga Ka Kacaan ‘Nimaan Shaqaysan Shaah Ma Cabo’
Waxa hubaal ah in aadamuhu uu gaadhi karo hadafkiisa haddii ay ka go’antahay, waxaana xaqiiq ah in go’aan qaadashada saxda ahi ay tahay aasaaska nolosha qofka, taasi oo u horseedi karta guul iyo barwaaqo.
Waxaan idinla waddaagayaa dhacdo mucjiso lagu tilmaamay oo ka dhacday Dalka China oo muujinaysa siday dadka u dhashay dalkaasi uga go’antahay inay wax qabsadaan taasi oo runtii ku dayasho mudan.
Dalka China ayaa waxa uu guud ahaan Dunida kaga yaabiyay wax soo saarkiisa iyo sidoo kale dhismayaasha cajiibka ah ee ka dhisan, sidoo kalena waxa guud ahaan caalamka la yaabka ku noqotay mashaariicda Ballaadhan ee ka socda gudaha Dalkaasi.
Dadka u dhashay Dalka China ayaa waxay had iyo jeer muujiyaan waxqabadkooda, kuwaasi oo ku dedaala inay shaqooyinka loo igmado ay u fuliyaan sida ugu dhakhsaha badan, arrintaasi ayaa waxay faa’iido u tahay dhaqaalaha dalkaasi.
Waddooyinka ay maraan tareenadu waxay ka mid yihiin mashaariicda waawayn ee u baahan shaqaale aad u badan waxaanu mashruucaasi oo kale sida caadada ah qaataa ugu yaraan 6 bilood.
Haddaba, 1,500 oo shaqaale una dhashay Dalkaasi ayaa waxay ku guuleysteen inay wado tareen oo cusub ay ku diyaariyaan muddo 9 saacadood ah.
Mushruucaasi ayaa waxay ka fuliyeen Gobolka Fujian ee ku yaalla Koonfurta Dalkaasi waddadani cusub ayaa waxay isku xidhi doontaa saddex magaalo.
Waxa xaqiiq ah maahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd Dedaala Xaaji Cabaas gaadhaa waana Dhaafi karaa.
Shacabka China waa shacab muddan in lagaga daydo waxqabadkooda iyo wax soo saarkooda.
Haddii aynu nahay shacabka Somaliland waxaynu u baahanahay inaynu noqono dad waxqabad badan kuna dedaala in aynu wax soo saarno si aynu uga maarano waxyaabo badan oo debada aynu ka sugno kuwaasi oo aynu si dhib yar kula soo bixi karno.
Waxaad moodaa shacabkeena in aanay ka gonayn inay wax qabsadaan maadaama oo aanay wali u dhaqaaqin sidii ay wax u soo saaran lahaayeen.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu Ballanqaaday inuu dhiirigalin doono wax soo saarka Dalka gaar ahaan cuntada, run ahaantii waa ballan aad muhiim ah waxaanan hubaa in Madaxwayne Muuse Biixi uu ballanqaadkaasi ka dhabayn doono, sidaasi awgeed waxa inala gudboon shacab ahaan in aynu noqono dad waxqabad leh si aynu u xaqiijino hadafkaasi qaalliga ah ee uu inoo ballanqaaday Madaxweynaheenu.
Waxa iga dardaaran ah in aynu fadhiga ka kacno noqonana dad hadalkooda ficil waxqabad muuqda u bedala.
Qalinkii Axmed Cabdiraxman Cabdalle